Edelweiss - imbali bukhule ezinkangala. Lokho kungenxa yokuthi butholakala kuphela ezintabeni, lapho akuvamile kwenzeka ngaphambili, ngaye sakhiwa zinganekwane eziningi amahle izindaba.
Igama Botanical le mbali - Leontopodium, kuvela nokuhlanganiswa amagama amabili Greek - "ibhubesi» (leon) kanye "unyawo» (opodion). Yileyo kuhunyushwa - isidladla sengonyama, olubheka ngempela Edelweiss. Imbali namanje unamagama amaningi ezifana French basibiza ngokuthi "yisikhathi Alpine Star", amaNtaliyane - ". Princess Alps" "esiliva imbali amatshe", usengakwazi ukuzwa igama "rock star", "imbali Prometheus" noma Ngokuvamile, abantu akuzona ncishana bahlangana izithombe amahle kakhulu olusankondlo ukuchaza Edelweiss.
Kodwa kuthiwani igama Russian? Nokho, Russian kungenziwa ngokuthi ngokwemibandela kuphela, ngoba Edelweiss - igama German elisho ukuthi "white yizicukuthwane".
Imbali, isithombe eyinkampani kulesi sihloko, kuyinto okusikhumbuza ngaphezulu izinkanyezi ezincane, okuyinto esikhathini izimbali yithela emithambekeni ye Carpathians kanye Alps. Lesi sitshalo has amahlamvu ewumngcingo ngenhloso ngaphandle enoboya abangaphansi, basuke eqoqwe rosette obukhulu. umbala abathandwayo amahlamvu - ke ziyahlukahluka kusuka grey-oluhlaza kunesiliva. Ehlobo lika esidayisa ikhula eluhlaza ngempela mude sifanamsindvo okusezingeni eliphezulu mayelana 25 cm. Kamuva ukuqhakaza izimbali ezinhle kumhlophe njengoboya izinkanyezi kancane, uvikelekile mnene noboya emhlophe.
Edelweiss izimbali: Umlando kanye legend
Kusukela ezikhathini zasendulo, lesi sitshalo ubizwa ngokuthi uphawu uthando, injabulo nokuphila kade. Madoda, ukuze kuzuzwe ubufakazi buvune ladylove bakhe, waya ezintabeni ukuthola Edelweiss olulodwa. Imbali zatholakala kanzima kangaka ke yanikwa intombi yakhe njengoba ubufakazi bokuthi umuntu ilungele wakhe ukuze uthole yentaba, futhi ngomqondo truest izwi.
Nokho, lesi simo - kunalokho olusankondlo isithombe kuka ngokoqobo. Edelweiss inkathi zezimbali kuvamile impela emithambekeni yezintaba, ukuze lover wasenganekwaneni azange abe ukucinga eside ngoba imbali, futhi kwakuye kudingeke ulinde isikhathi esifanelekayo. Okungenani kuze kube muva nje, kuyilapho izivakashi, bakhangwa lezi zinganekwane efanayo kwaqala lokuqoqa armfuls ka Edelweiss. Ngakho-ke, manje, lezi zitshalo ahlelwe Red Book of Russia.
Ngaphezu kwalokho, i-legend ezithakazelisayo mayelana nokubonakala Edelweiss. On omunye wabo, kwafika isitshalo kusukela isidumbu sowesifazane owathola indoda yakhe abaphili ezintabeni futhi wanquma sife kanye naye, ngakolunye - Kwathi kusukela izinyembezi a inganekwane enhle, ubani wathandana insizwa, kodwa angikwazanga esehlile ezintabeni. Lezi zindaba zasendulo zihlanganisa kunezindawo eziningi, kodwa ngamunye kukhona nakanjani indaba uthando nge mphumela odabukisayo.
Yini enye ongayisho Edelweiss? Le mbali akuyona kuphela enhle kakhulu, kodwa futhi ngendlela emangalisayo ewusizo. Njengoba kufakazelwa ososayensi, iqukethe eziningi Antioxidants, okuyinto ezibhekwa ukwaziswa kwekhethelo lokulondolozwa isikhumba bobusha. Futhi manje, lesi sitshalo isetshenziswa ukukhiqiza izimonyo. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngalezi zinhloso Edelweiss ikhule, futhi musa ukuqoqa, ngoba endle basuke ayisasebenzi ...
Dollar Tree: ukunakekela izitshalo
Apricot: ezihlukahlukene. Incazelo izinhlobonhlobo amabhilikosi (isithombe). Amazinga engcono
Document Ukwahlukanisa: nenqubo eyisisekelo
Dysplasia wesibeletho: Ukwelashwa.
Ukuthola lokho okungenzeka ukuthi bancishwa amalungelo sabazali? Art. 69 RF IC. ukuchitha